हेर्नुहोस आज असोज २६ गतेका मुख्य समाचारहरु – Complete Nepali News Portal
हेर्नुहोस आज असोज २६ गतेका मुख्य समाचारहरु
मोरङको धनपालनाथ गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिकै रोहबरमा ब ,ला ,त्का ,रको घटनामा मिलापत्र गराइएको छ ।
पीडित युवतीलाई ५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिने भनेर उधारोमा मिलापत्र गराइए पनि पीडक पक्षले रकम नदिएपछि पीडित पक्ष प्रहरीसमक्ष पुगेको छ । उधारो मिलापत्र गरिएको कागजमा धनपालथान गाउँपालिका – ५ कि वडा सदस्य नेपालदेवी खवास र बेलबारी नगरपालिका– ८ का वडा सदस्य प्रवीणकुमार खवासले समेत हस्ताक्षर गरेका छन् । यो संगै आज असोज २६ गतेका मुख्य समाचारहरु तलको भिडियोमा हेर्नुहोस :
एकैदिनमा अमेरिकामा कोरोनाबाट २ लाख १७
शनीदेब ले सबैको कल्याण गरुन !
म पनि त् मानब हु, भगवान
मुटु काप्ने भिरमा ३ युवती मिलेर
पोखरामा के भयो यस्तो धर्तीनै फाट्यो
फूल फुलेरै केभो? फुल्नुको अर्थ छैन
सरकारले सुतेको बाघलाई ब्युँझाएको काँग्रेसका नेताहरुको टिप्पणी, नेकपाका अध्यक्षहरुलाई मिलाउन...
प्रहरीको निगरानीमा बलात्कारी कसरी भाग्छ ?